सामाजिक अभियन्ता बिकु लामाको पहलमा स्तन क्यान्सर पीडित मनिलालाई जुट्यो २१ लाख सहयोग – Chautari Online
September 5, 2020 244
काठमाडौं : झापा चन्द्रगढी-१० की मनिला खतिवडालाई दुई वर्ष अघिबाट क्यान्सरले च्याप्यो। काठमाडौंस्थित बानेश्वर बस्ने उनी भारतको नयाँ दिल्लीस्थित राजिव गान्धी अस्पतालसम्म उपचारका लागि पुगिन्।
करिब १० वर्षअघि उनका दाजुको पनि क्यान्सरकै कारण मृत्यु भयो। आमा बुवा घरमा। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो नै। २६ वर्षीया खतिवडाले भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भुगर्भशास्त्रमा स्नातक उतीर्ण गरेकी थिइन्। दिल्लीमा खर्चले धान्न सकेन। बेखर्ची भएपछि फर्किन् काठमाडौं।
एक महिनाअघि फेरि क्यान्सरले च्याप्यो। त्यसपछि उनी ललितपुरस्थित हरिसिद्धीमा रहेको नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा भर्ना भइन्।
तर, अभाव खर्चकै थियो। अस्पतालबाटै आफ्नो ज्यान बचाउन विभिन्न ठाउँ पुगेर हारगुहार गरिन्।
उपचारका लागि जुट्यो २१ लाख
मनिलाको अवस्थाबारे सामाजिक सञ्जालदेखि उनका साथीबीच चर्चा भयो। त्यसैमध्ये काभ्रे चौरी देउरालीका सामाजिक अभियन्ता बिकु लामाले पनि उनलाई सहयोग गर्न गत बुधवारमात्र सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरे। ‘मनिला खतिवडा बचाउ अभियान’ भन्दै लामाले मनिलालाई सहयोग आह्वान गरिएको चार दिनमा मनिलाका लागि २१ लाख ६८ हजार बढी रकम उठेको छ।
भदौ १० गते आफूले सहयोगको आह्वान गरेकोमा चार दिनमा विभिन्न दाताले सहयोग गरेको लामाले बताए। ‘अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान र नेपालबाट सहयोग जुट्यो,’ लामाले भने, ‘त्यसपछि मनिला खतिवडा बचाउ अभियान शनिवारबाट बन्द गरेका छौं।’
(अभियान स्थगित सम्बन्धमा सहयोगी सम्पूर्णमा जानकारी)
मनिला खतिवडा बचाउ अभियानमा स्वदेश तथा बिदेशबाट अहिलेसम्म संकलित रकम जम्मा Rs. 2168,293.77 (एकाइस लाख अठ्सठी हजार दुइ सय त्रीनब्बे हजार) Statement मा जम्मा Rs. 1,160,476.17 र जम्मा हुन बाँकी रकम $ US 8,605 (Rs. 1,007,817.60) अहिलेलाई यति रकमले पुग्ने भएकोले हाम्रोतर्फबाट आजदेखि यो अभियान बन्द भएको जानकारी गर्दछौं । यस्तो बिषम परिस्थितिमा पनि अभियान सफल पार्न साथ, सहयोग, समर्थन र आर्थिक सहयोग गरिदिनु भएकोमा भविष्यमा पनि यस्तै मानविय सतकर्ममा पूर्ण सहयोगको अपेक्षाकासाथ हजुरहरु सम्पूर्णलाई अन्तरात्मादेखि नै नमन एवम आभार ब्यक्त गर्दछु । सबैजनको जयहोस ।
सामाजिक अभियन्ता एवम संयोजक
बिष्णु शाही ठकुरी
स- संयोजक एवम सामाजिक अभियन्ता
भुवन सिंह कुँवर
प्रबिण लाल श्रेष्ठ
अहिलेका लागि उपचार रकम पुग्ने देखिएकोले चन्दा संकलन रोकिएको उनले बताए। क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत उनले आफ्नो स्वास्थ सुध्रिँदै गएको बताइन्। मनिलाले भनिन्, ‘अहिले राम्रो हुँदै आइरहेको छ। २२ दिन भयो नेसनल क्यान्सर अस्पताल बसेको। रोगसँग फाइट गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर डर चै अझै लागिरहेकै छ। खर्चको अभाव थियो। अहिले यति रकम उठिसकेको रहेछ। यसको लागि भारतमा बस्नुहुने विष्णु दाई र बिकु दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।’
अहिले मनिलाको एउटा स्तन हटाइएको छ। आफू छिट्टै निको हुनेमा उनी विश्वस्त छिन्।
Prevकरोड उठाएपछि संक्रमितलाई बीमा दावी भुक्तानीमा नयाँ शर्त
Next‘हावा खाऔँ भन्दै जङ्गल लगे, मोटरसाइकलमै पछाडिबाट घाँटी रेटे’
राशी अनुसार कुन मानिसको स्वभाव कस्तो ?(भिडीयो हेर्नुहोस)